Sawirro:- Amaro la dul dhigay Goobaha lagu caweeyo ee magaalada Muqdisho. – Banaadir Times
By banaadir 31st March 2020 155
Guddiga heer Gobolka ee Maamulka Gobolka Banaadir u qaabilsan ka hortaga caabuqa Corona Virus (COVID19) oo ay hogaamiso Guddoomiye Kuxigeenka Arrimaha Bulshada iyo Wacyigelinta Marwo. Basma Caamir Axmed oo maanta kulan ku yeeshay xarunta aqalka Dowladda Hoose ee Xamar ayaa soo saaray go’aamo la xiriira Hakinta Isku-imaashiyaha Bulsho iyo Talooyin Caafimaad.
Wareegto kasoo baxday Maamulka Gobolka Banaadir ayaa lagu xusay in la Hakiyo isku imaatinka Bulshada iyadoona fariin loo diray Hoteelada, Maqaayadaha iyo goobaha Dalxiiska ee Muqdisho.
Waxaa muddo 2 todobaad ah la joojiyay dadka usoo dabaal taga xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho iyadoona sidoo kale la joojiyay goobaha lagu caweeyo ee lagu istecmaalo shiishadaha.
Hoteelada, Maqaayadaha iyo goobaha Dalxiiska ayaa la faray in ay diyaariyaan agabyo Nadaafadeed ee loogu hortagi karo faafida Caabuqa COVID19 sida; goobo farxal nadaafadeed iyo jeermis dile, iyadoona hab fadhiga goobahaasi laga dhigayo mid kala fog si loogu hortago faafida caabuqa COVID19.
By banaadir 8th March 2021